Siyaasi loo maxkamadeynayo tacadi ka dhan ah dad ay Soomaali ku jiraan - Worldnews.com
ROMA, Italy – Aqalka Sare ee baarlamaanka Talyaaniga ayaa u coddeeyay in xasaanada laga xayuubiyo hogaamiyaha midigta fog Matteo Salvini, oo sidoo kale ah madaxa xisbiga League ee Italy.
Salvini oo qorshuhu yahay in maxkamad lasoo taago ayaa loo haystaa eedeymo loo jeediyey intii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha
Wariye dacwad loogu soo oogay warar uu ka faafiyey caabuqa Karona
KUALA LUMPUR, Malaysia – Haweenay wariye ah oo u dhalatay Malaysia ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta in uu baqdin ku abuurtay dadweynaha markii uu Facebook soo dhigtay...
Gareowe Online 2020-02-05
Cumar Xasan Al Bashiir oo lagu wareejinayo Maxkamada ICC
KHARTUUM, Suudaan – Madaxweynihii hore ee Suudaan, Cumar Al Bashiir ayaa lagu wareejinayaa Maxkamadda Dambiyadda Caalamiga ah si uu u wajaho dacwado la xiriira dambiyo...
Geelle oo isu soo sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya
JOHANNESBURG, South Africa – Isagoo magaalada Johannesburg ee Koonfur Afrika kula hadlay Jaaliyadda Soomaaliyeed, Daahir Maxamuud Geelle ayaa ku dhawaaqay in uu damac uga...
Maxkamad go'aan kasoo saartey in Kenya ay ka baxdo kiiska badda
NAIROBI, Kenya – Maxkamad ku taala Nairobi ayaa u ogolaatay xeer-ilaalinta guud in ay ka qeybgasho dhageysiga dacwada Soomaaliya iyo Kenya ee hortaala Xeer-beegtada...
Pep Guardiola, ayaa hoos u dhigay suuragalnimada in Lionel Messi uu ku soo biiro kooxda Manchester City waxaa uuna aaminsanyahay in weeraryahanka uu xirfaddiisa ciyaareed ku soo geba gabeyn doono kooxda Barcelona. Messi, oo 32 jir ah, ayaa mustaqbalkiisa ciyaareed ku qaatay Barca, laakiin waxaa jira qodob u saamaxaya inuu si xor ah uga tago kooxdaasi markii uu dhammaado xilli...
Trump oo ka hadlay in uu cafinayo xubnihii abaabulay xilka qaadistiisa
WASHINGTON, US – Madaxweyne Donald Trump ayaa caddeeyay in uusan saamixi doonin xubnihii isku dabariday xilka xayuubintiisa. "Mararka qaarkood ma sahlana waxyaabo aad jeceshahay, marka ay timaado xil ka xayuubin waxbo ma ahan, sidda aad u jeceshahay, aniga waxaan isku dayayaan in dadkaas aanan u fududeyn," ayuu yiri. Hadalkaan...
Madaxtooyada Turkiga oo gudbisay mooshin saameynaya Soomaaliya
ANKARA, Turkey – Madaxtooyadda Turkiga ayaa shalay baarlamaanka dalkaas u gudbisay mooshin qeyb ahaan saameynaya biyaha Soomaaliya. Mooshinkaas ayaa ku saabsan in muddo kordhin loo sameeyo ciidamadda ka jooga Gacanka Cadan, biyaha Soomaaliya iyo Badda Carab. Xeer-dejinta ayaa ka doodi doonta soo jeedintaas maanta oo Arbaco ah, waxaana qorshuhu yahay in kadib ay cod u qaadaan....
Xafiis xoojinaya xiriirka Soomaaliya iyo India oo laga furay Garowe
GAROWE, Puntland – Dowladda India ayaa shalay waxay magaala madaxda Puntland ee Garowe ay ka hirgelisay xafiis la tilmaamay in uu qaban doono howlo muhiim ah. Xafiiskaas oo la sheegay in uu xoojinayo xiriirka Hindiya iyo Soomaaliya ayaa loogu adeegayaa muwaadiniinta Hindida ah. Baadiyahooda gaarka ah oo ay kolkii hore u aadi jireen magaalada Garowe ayaa qorshuhu yahay in loogu...
Maxamuud Sayid oo tegay Beledxaawo xili ay ka jirto xaalad cakiran
KISMAAYO, Jubaland – Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland, Maxamuud Sayid Aadan, ayaa geeray magaaladda Beledxaawo ee gobolka Gedo. Maxamuud ayaa lagu waramay in uu magaalada ka galay dhanka xuduudka Kenya, isagoo uu wehliyo Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga Jubaland. Booliska Soomaaliya oo sheegay in Janan uu 28-kii Janaayo ka baxsaday goob lagu hayey ayaa Kenya iyo...
Tahriibayaashu waxay saarnaayeen doomo aad u yar
Sagaashan tahriibayaal oo ay carruur ku jiraan ayaa lagu soo badbaadiyey xeebaha dalkaasi Ingiriiska. Siddeed doomood oo kuwa yaryar ayaa soo gaaray biya xireenka Dover, mid ka mid ah doomahaasina ay sidday 21 tahriibayaal oo rag ah. Wasaaradda Arrimaha gudaha Ingiriiska waxay sheegtay dadkaasi muhaajiriinta ee la soo badbaadiyey inay u dhasheen waddamada Suuriya, Yemen iyo...